Mhlawumbe, akukho nja esisodwa, ngoba uma empilweni yakho ngeke uye wathinta inkinga ka namazeze noma imikhaza. Wonke umnikazi uyazi ukuthi niyakudinga lokho ngokushesha ngangokunokwenzeka balahle lezi zivakashi ezingalindelekile. Yilokho izidakamizwa ukukhetha? Ngenxa ukuhlukahluka imikhiqizo umkhiqizo wezilwane nje ahlakaze amehlo.
Isihloko amadili nomunye amathuluzi ezakhelwe ukulwa namazeze namakhizane - "inkantini Forte" izinja.
Kusho akhiqizwa ngendlela isixazululo, futhi senzelwe ukusetshenziswa yangaphandle. "Inkantini Forte" iqukethe ukubunjwa yayo diflubenzuron futhi fipronil njengoba izinto esebenzayo, nezinsizasenzo ezifana utshwala isopropyl, polyethylene glycol, kubalulekile amafutha citronella, polyvinylpyrrolidone.
Ngaphandle, umuthi selivela esobala ophuzi ketshezi oily futhi has a iphunga othize.
Khipha ifomu isitoreji izimo
Njengoba Ekuqaleni kuphawuliwe ngenhla, "Bars Forte" iyatholakala njengoba ketshezi. Ngo ukudayiswa amaconsi ukuza prepackaged e weThrojani polymeric pipette 0.5, 1, 1.8 ml. Agcwele ebhokisini amakhadibhodi, equkethe:
3 noma 4 ampoules kusho "inkantini Forte" izinja;
Gcina izidakamizwa kumele kube ezingeni lokushisa 0 kuya ku-30 degrees endaweni eyomile, umthunzi elangeni. Shelf ukuphila iminyaka 2 kusukela usuku ukwakhiwa. Ngokusho ukusetshenziswa ekupheleni amathonsi akuvunyelwe nakancane.
Drops "inkantini Forte 'kubhekisela esenzakalweni esiyisimangaliso nemithi inhlanganisela insektoakaritsidnym. Ziyakwazi ephumelela kakhulu ekulweni namazeze, izintwala namakhizane.
Kungayiphi indlela zathola imiphumela emihle kakhulu ngesikhathi ukusetshenziswa kwezidakamizwa "inkantini Forte" ngoba izinja? Imiyalelo, okuyinto iza izikhwebu nge agent, kunikeza impendulo yalo mbuzo.
Fipronil Gaba-ivinjiwe engaphansi receptor amagciwane, ephula ukudluliselwa nerve amaza. Lokhu kuholela ukukhubazeka nokufa namazeze, amakhizane nezintwala nokunye.
Diflubenzuron kuvimbela chitin zamagama, okuholela okhathazekile inqubo molting izibungu ezidala, okuyinto yena, kuvimbela ukuthuthukiswa kwabo okwengeziwe kanye nenguquko ku isiphungumangathi. Ngenxa yalokho, lezi zinambuzane afe kakade kwezokunyathelisa, ngakho labantu babo ayisekho ezikhulayo.
Ngakho noyedwa izinto asebenzayo ikhumbule emva isicelo ku kwegazi. Bazigcina bese buthelela ku follicle izinwele, izindlala sebaceous kanye epidermis sesilwane, ukuhlinzeka ngayo isivikelo yokulwa izinambuzane.
"Inkantini Forte" Drops ngoba izinja basonta iqembu izinto ngokulinganisela eziyingozi esekelwe umthelela wabo emzimbeni. Endabeni nokulandela imiyalelo nokushintsha kokudla nokufakwa inikezwe ekulungiseleleni, umphumela isikhumba-kuyacasula esinobuthi rezorbtivno-niqaphelisa ayibangelwa. Nokho, i-ejenti kunomphumela ezinobuthi ku onogwaja nenhlanzi nezinye izilwane zasemanzini. Iso izidakamizwa kungabangela ukucasuka okukhulu kubo.
Drops "inkantini Forte" ingasetshenziswa kokubili ukuze belaphe futhi ukuvimbela ukubukeka namazeze, nezizenze ezinjeni. Asetshenziswa ebukhoneni notoedroza futhi mange sarcoptic.
Ithuluzi asisebenzi maqondana izilwane okuyiwona kukhona hypersensitivity elilodwa noma ngaphezulu yezingxenye izidakamizwa.
Ngaphezu kwalokho, "inkantini Forte" is contraindicated ku izinja uma banayo yezifo ezithathelwanayo noma esikhathini buthakathaka komzimba noma yokutakula.
Umuthi uvinjelwe ukusetshenziswa kanye nabesifazane abakhulelwe noma lactating, futhi imidlwane, ogama yobudala engaphansi kuka ezi-8.
Kubaluleke kakhulu ukuba acabangele isisindo isilwane, njengoba amathonsi "inkantini Forte" ayikwazi kusetshenziswa khona esisindo engaphansi kuka 2 kg.
Indlela yokusebenzisa lesi sidakamizwa "Bars Forte"? Yokusetshenziswa inikeza ulwazi okulandelayo.
Amaconsi zenzelwe isicelo esisodwa. Kulokhu, esikhumbeni sesilwane akufanele kube yimuphi imihuzuko noma ezinye umonakalo. Amaconsi ambalwa izindlela ezidingekayo ukubeka endaweni, zingakwazi ukufunda slizyvanie isilwane: ngemuva phakathi kwamahlombe noma entanyeni ngasesinqeni Yekhanda. Phakathi isicelo kubalulekile ukuba banamathele ezibekwe ngokucacile e imiyalelo umthamo. Ngokwesibonelo, uma isilwane enesisindo 10 kg kwakwanele wonke umsindo ukulungiselela pipette ke nge okwandisa isisindo isilwane siba ezidingekayo izingxenye ezimbili noma ngaphezulu izindlela ukufeza umphumela oyifunayo.
Uma kukhona izimfanelo re-ukucutshungulwa enze kube nokwenzeka ngaphambili kuka ngenyanga eyodwa emva wokuqala izindlela isicelo.
Uma injongo izidakamizwa uba ukususwa kusuka isikhumba umkhaza isilwane kufanele ngokucophelela isetshenziswa iconsi ukulungiswa amagciwane. Phakathi isigamu sehora ke kuyomelwe awe bebodwa. Uma lokhu kungenzeki, kudingeka ngobumnene uyisuse nge udlawana.
Ukuze uvikele imfuyo ekutheni ukunqotshwa okuphindaphindiwe namazeze kanye nezinye izinambuzane, kubalulekile ngokuhambisana yokusetshenziswa ukuze ususe zonke udoti wakhe, noma ukucubungula kwabo zinambuzane.
Ngemva kokucubungula olwenziwa isilwane akuvumelekile ukubhukuda imizimba natural yamanzi amahora 48 emva isicelo amaconsi.
Kubalulekile ukulandela lwemithi ezinqunyiwe izidakamizwa ukuze kuzuzwe imiphumela oyifunayo.
"Inkantini Forte" ayengavunyelwe ingasetshenziswa lihambisana namanye amanxusa ngokumelene namazeze, imikhaza nokunye.
izidakamizwa ukweqisa izidakamizwa
Ukuba khona ukungabekezelelani ngazinye izingxenye imoto noma ngokweqile abalulekile esiphezulu umthamo yayo ibekezelelwe kungaba imbangela yezinkinga nemiphumela engemihle. Uthishanhloko kubhekwa ukuhlanza, amehlo zamanzi, amathe ngokweqile. Ezimweni ezinjalo, kubalulekile njengoba izinsalela izidakamizwa kungenziwa wageza ngokushesha noboya futhi isilwane isikhumba nokusetshenziswa yokuwasha. Kulesi isilwane kungenzeka yokwelapha lingaze kunikezelwe.
Okumele kuqashelwe Special
Lesi sigaba se-atikili kumayelana hhayi nezilwane, kanye nabanikazi bazo, okuyinto kubalulekile ukukhumbula bese ulandela izimiso ezimbalwa ezilula:
Lapho usebenzisa izimali ngesikhumba sesilwane kufanele nigcine sinemikhuba emihle yenhlanzeko nokuphepha. Phakathi naso sonke zokukhwabanisa akuvunyelwe nhlobo ukuba udle, uphuze noma intuthu.
Phakathi namahora angu-48 emva kokwelashwa ayikwazi olwenziwa ukuvumela izingane ukuba unhlangothi isilwane, noma ngaso sonke ukuzifinyelela ke.
Sebenzisa iconsi "inkantini Forte" esikhunjeni yenja kungenzeka abantu abangenayo hypersensitivity kuya kumalungu yokulungiselela.
Uma azizwani iguliswa noma ezinye izimpawu omubi ilunga lomndeni kufanele ngokushesha ufune usizo lwabezokwelapha. Naye ngalesi sikhathi, kuyatuseka ukuba yokusetshenziswa noma okungenani esebenzisa ilebula.
Packagings linegama izidakamizwa zokwelapha kumelwe isuswe kabusha. It kungavunyelwe ukusetshenziswa kwalo okunye kulelikhaya noma nezinye izinjongo.
okubuyayo mayelana izidakamizwa
Okushiwo ngabantu mayelana abanikazi bezinja uphonsa "inkantini Forte"? Izibuyekezo ezimweni eziningi ezinhle, nakuba zikhona nezinye imibono engakhi. Ukuze kube lula wanezela, sibheke kubo ezigabeni ezahlukene.
Ngakho, siqale nobuhle nobubi zomuthi. abantu abaningi abafuye ukuyisebenzisela eminyakeni embalwa edlule futhi naso sonke lesi sikhathi, basutha ngesivinini yayo yesenzo, ukusebenza kahle eliphezulu futhi ukulondolozwa eside imiphumela izuzwe. Kumayelana amacala agents izinjongo zokwelapha kanye prophylactic.
"Inkantini Forte" kuhlukile imikhiqizo efana oyiyo ekhethekile, okuyinto ethatha ngobumnene kakhulu. Yingakho-ke ovunyelwe ukusebenzisa, ngisho umdlwane esithatha izinyanga ezimbili. Nokho, iconsi akaphelelwa izikhwepha zayo kanye ngokuphumelelayo izinhlobo eziningana ezidala, ezisukela nezintwala namazeze namakhizane kokuqeda.
Iphuzu olandelayo - lula kokusebenzisa umuthi. pipette Special ivumela ukubeka ke ngokushesha nangokuqondile, hhayi ibala izandla zakho noma izingubo.
Ngaphezu kwalokho, abanikazi bezilwane abakwazi kodwa jabulani ongaphakeme izindleko amathonsi "inkantini Forte", emaphaketheni abo elula nokuphila eshalofini ngokwanele eside.
Njenganoma iyiphi enye lezimpahla, lehla "inkantini Forte" kunezimo nje kuphela kodwa futhi yokuntula. Lokhu waphinda kuqinisekisa ukuthi azikho amakhambi jikelele, kanye izidakamizwa kwakungekho okuhlukile ngokuqondene nalo mthetho, naphezu semali okubuyayo ngakho. Ngakho, lokho akusho ivumelane abanikazi ezifuywayo amathonsi "Bars Forte"?
Okokuqala, it is a esifushane isenzo izidakamizwa. Kuyinto ngaphakathi 1-2 izinyanga. Njengoba ubona, kwencazelo "amancane" kulesi sici - yigama.
Okwesibili, ukusetshenziswa eliphezulu isidakamizwa for izinja of izinhlobo ezinkulu. Ngesikhathi lapho isilwane nesisindo 10 kg kwanele isitsha esisodwa nje, nge isisindo enkulu inombolo yabo kuzokhulisa kulingana.
Okwesithathu, kwezinye izimo, ithuluzi wazibonakalisa ayizwakali ekulweni izibungu. Nokho, izimo ezinjalo zivame.
Enye into ukuthi onganelisekile abanye abanikazi - kuyinto nephunga engavamile izidakamizwa. Nakuba ezimweni eziningi namanje neyaziwayo abathathi hlangothi futhi ngokuletha ngokuphazamiseka okukhulu.
Kungakhathaliseki ukuthi isimo sinjani, inani izinzuzo lingaphezulu kakhulu kunenani kwamaphutha. Lokhu kusho ukuthi idivayisi beqashelwa esasiwafanele phakathi abaningi abafuye futhi ubhekwa yezindlela ezingcono kakhulu ukulawula izinambuzane noma izibungu.
By the way, umenzi ukhiqiza zinhlobo ehlukile lehla "inkantini Forte" for namakati. Lokhu kusho ukuthi umuthi jikelele.
Umuthi 'Zodak ": wokubuyekezwa okuvumelekile
Izidakamizwa "Reduxine": imfundo manual esixwayisa imiphumela engemihle
Ihhotela Dendro Ihhotela 3 *, eVietnam, Nha Trang: ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Isiteleka Zonke-Russian zezombusazwe ngo-Okthoba, 1905:. incazelo, umlando, ukusebenza kanye ezithakazelisayo amaqiniso
. "Univer entsha ehostela" Reloaded ozithandayo umfundi chungechunge. Uni Abalingisi '. Ehostela okusha "
Indlela yokukhetha imikhiqizo eshibhile ku-Aliexpress
Cinnamon: inzuzo, umonakalo, noma umane a Iphunga emnandi?